Israa’iil awood ay ugu hanjabto Iran malaha. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Israa’iil awood ay ugu hanjabto Iran malaha.
Maxamuud Mashkini, afhayeenka guddiga amniga qaranka ee baarlamaanka Iiraan, ayaa sheegay in Israa’iil “aysan u qalmin inay fuliso hanjabaadaha ka dhanka ah Iran”. Mashkini ayaa wareysi uu siiyay Al-Mayadeenon Isniintii ku yidhi: “Israa’iiliyiintu way yaqaanaan awoodooda waxayna garwaaqsadeen inaysan lahayn itaal ay ku hanjabaan. Sahyuuniyaddu waxay ogtahay in dhaqaaq militari oo kasta ay ku jabayaan, oo uu ku lumi karo jiritaankoodu,”.
“Israa’iil iskama indho tiri doonto dhacdadii lagu bartilmaameedsaday markabkeedii, mana ku qanci doonto ficil siyaasadeed, laakiin waxay jawaabi doontaa waqtiga iyo goobta ku habboon,” warbaahinta Israa’iil ayaa soo xigatay.
Arintani waxay timid kadib markii mareegta amniga badda ee Driyad ay xaqiijisay Jimcihii la soo dhaafay, in markab laga leeyahay Israel lagu bartilmaameedsaday gacanka Cumaan ayna fulisay weerarkaa diyaaradi.
Tehran ayaa dhankeeda beenisay eedeymaha loo soo jeediyay. Isniintii, afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa ka digay in ay ka jawaabi doonaan isku day kasta oo lagu beegsado iran iyo danaheeda.
Wasiirrada arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo Britain ayaa ballan qaaday inay jawaab ka bixin doonaan weerarka markabka Israel.
Washington iyo London waxay ku eedeeyeen Tehran inay ka dambaysay Dhacdadii Markabka Shidaalka ee Israel ee marayey Badda Cumaan, Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Iran ayaa u yeedhay ku -xigeenka safaaradda Ingiriiska ee Tehran Isniintii, iyadoo ku wargelisay sida Iran uga xuntahay eedaymaha Ingiriiska ee shilka markabkaa.
Xigasho: Al-Mayadeen Net
Previous articleBaydhaba waxaa lagu doortay qaar ka mid ah mudanayaasha aqalka odayaasha Soomaaliya
Next articleMaxkabadu waxay dib u dhigaysaa guryo ka saarista qoysaska “Sheekh Jarrax”